Mongolia Nsrahwɛ | Nsase ne Nnipa
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Iloko Indonesian Italian Japanese Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luvale Macedonian Malagasy Myanmar Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Zulu
ƆSAHENE kokodurufo bi a ɔde Genghis Khan na ɔkyekyee Mongol Ahemman no wɔ Kristo wu akyi bɛyɛ mfe 1,200. Ná Mongol Ahemman no sõ, nanso ɛnnɛ ne fã bi pɛ na aka a wɔfrɛ no Mongolia, na ɛhyɛ Russia ne China ntam. Yɛreka aman a wɔn asase so na emu nnipa sua a, Mongolia ka ho.
Mongolia asase no fã bi yɛ ɛsrɛ a ɛda hɔ yantam. Baabi nso yɛ mmepɔwmmepɔw ne nsuo nsuo. Gobi Anhweatam no da ɔman no anafo fam. Ɛhɔ agye din paa, efisɛ nkurɔfo kɔ hɔ kɔhwɛ dinosaur nnompe. Mongoliafo frɛ wɔn man no “Owia Asase.” Edin yi fata no efisɛ anyɛ yie koraa no afe mu no nyinaa, owia tumi bɔ nnafua mmaako mmaako 250 ma ewim te nwann!
Mongolia yɛ baabi a sɛ owia sɔ mu sɛ ɛrebɔ a ɛnyɛ agorɔ, na awɔ nso ba a, ɛkyɛn frigye mu. Wokyɛ Mongoliafo mu mmiɛnsa a, emu baako yɛn mmoa, enti wɔtaa di atutena. Wɔsɔre anɔpa paa kɔkyĩ nnwan, nantwi, yoma, ne pɔnkɔ nufosuo. Nufosuo mpa Mongoliafo aduane mu. Ɛnam a wɔpɛ paa ne dwanam.
Nufusuo a akyen (aaruul); wɔahata wɔ awia mu
Mongoliafo pɛ ahɔhoyɛ paa. Daa na wɔabue wɔn apon ato hɔ, na sɛ ɔkɔm de ɔhɔhoɔ bi a, ɔtumi man fa hɔ kɔpɛ biribi di gye n’ahome. Wɔnya ɔhɔhoɔ a, wɔtaa yɛ tii de nkyene kakra tom ma no.
Wokɔ Mongolia a, Buddhasom agye ntini wɔ hɔ. Afei wobɛhu shamansom, Nkramosom, ne Kristo som nso wɔ hɔ. Nanso nnipa pii nkɔ asɔre biara. Yehowa Adansefo bɛboro 350 na wɔwɔ Mongolia, na wɔne nnipa bɛboro 770 sua Bible.
Wɔtaa de yoma fa nneɛma wɔ awɔ bere mu mpo
Emu nnipa dodow: 2,713,000
Kasa titiriw: Mongolia kasa, Russia kasa, ne Turkic kasa
Nneɛma a wɔkɔtɔn wɔ amannɔne: Kɔbere, biriw (coal), sika kɔkɔɔ, ne nnwan nwi